Umdlalo omtsha weKlasi yeSage ngoku uyafumaneka kwiSewula yeNtlango emnyama
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Umdlalo omtsha weKlasi yeSage ngoku uyafumaneka kwiSewula yeNtlango emnyama
IPearl Abyss ibhengeze namhlanje ukuba iklasi entsha yeSage enomdla ngoku iyafumaneka kwiBlack Desert Mobile. Kule veki, abaVelisi banokujonga phambili kumxholo omtsha womdlalo i-Atumach Skirmish, apho abadlali abangama-25 babekwe ngokwamaqela abahlanu ukuze bakhuphisane ngemivuzo.
I-Sage, uMdala wokuGqibela, udidi lwe-caster-type kunye nenkosi yendawo kunye nexesha elikhupha amandla amangalisayo, awonakalisayo. Esebenzisa i-Kyve emile okwetyhubhu njengesixhobo sakhe esiphambili, uvula iintanda esithubeni kwaye abize Amandla e-Ator kunye nothotho lomlingo onamandla okhubekisayo.
Izakhono zakhe ezizodwa ziya kuvumela i-Adventurers ukuba izame ukudibanisa izakhono kwaye ifumane iindlela ezizodwa zokufumana isandla esiphezulu kwiimeko ezahlukeneyo zokulwa. Isixhobo esisezantsi, iTalisman, ikwavumela iSage ukuba ithathe ifom yokuhamba simahla kwaye ihambe ngesantya esimangalisayo kwiiphothali.
Izakhono zeSage zibandakanya
• I-Rift Chain: Vula i-portal komnye umlinganiselo ngokubeka i-Kyve kufuphi notshaba, emva koko uhoxise i-Kyve ukuvala i-portal kwaye ngoko konakalise utshaba.
• Isigwebo se-Ator: Biza amandla e-Ator evela phezulu, emva koko uyithumele ingqukuva phezu kotshaba.
• I-Wormhole: Faka umzimba wakho kwindawo yethutyana kaKyve ukuze uhambe ngokukhuselekileyo kumgama omfutshane.
• I-Spatial Shatter: Yenza umonakalo omkhulu kwiintshaba ngokutshabalalisa indawo ebangqongileyo.
Ukubhiyozela ukukhululwa kweSage, isiganeko sezinga elizuzayo lenzeka kude kube ngoNovemba 29. Abahambi abaphakamisa i-Sage yabo kwinqanaba le-70 baya kufumana imivuzo ebalulekileyo njenge-1000 Black Pearls, i-Tier 7 Pet kunye ne-Legendary Costume Set Chest.
Okokugqibela kodwa okuncinci, abo bathanda ukukhuphisana komdlalo we-co-op ngoku banokuyonwabela umcimbi we-Atumach Skirmish, ibala lokulwa apho i-25 Adventurers ibekwe kumaqela ama-5 abantu aba-5. Amaqela ke angqubana omnye nomnye kwaye umdlalo uphela xa uKumkani uGriffon woyisiwe. Ekupheleni kweSkirmish, abathathi-nxaxheba banokufumana iitywina zika-Atumach kwaye batshintshiselane ngazo ukuze bafumane umvuzo.